A na-agbanye akụrụngwa nke latex gloves n'ime ngwongwo akụrụngwa site na mgbapụta diaphragm maka ịgwakọta na nkwadebe, wee buru ha gaa ebe dị iche iche na akara akara latex glove maka imikpu n'oge ọrụ nke usoro mmepụta.
Nke mbu, a ga-ekpocha ihe nlere aka nke seramiiki na acid, alkali na mmiri; mgbe ahụ, ihe nlereanya ahụ ga-emikpu n'ime mmiri ọkụ maka ihicha. Mgbe nke ahụ gasị, ọ dị mkpa ka e mikpuo ihe na-adịghị ọcha na coagulant na ihe ndị ọzọ; usoro ntinye mmiri bụ ndị a: ebu ụzọ kpochaa ebu dị ọcha na mmiri ọkụ wee kpoo ya ruo mgbe etinyere ya na coagulant ma kpoo ya. Mgbe etinyere ya, a na-eziga ya na oven maka ihicha nke mbido, na-agbakwunye eriri n'ime ime, na-ekpochasị mmiri ọkụ wee ziga ya na oven maka ịba ụba, ihicha ma mebe. Mgbe ejiri aka kpochapu gloves, a na-agbanye ha, na-enyocha ha, na-eme ha na obere okpomọkụ, na-akpọ nkụ na ọkara okpomọkụ, na-asa ya na mmiri, akpịrị ịkpọ nkụ, na-akpọ nkụ, wee kpokọta ma zigara ụlọ nkwakọba ihe ngwaahịa ahụ.
Ihe omuma nke latex gloves
A na-ekewa gloves Latex n'ọtụtụ ụdị dịka o si eji ha eme ihe: mkpofu mkpochapu mkpofu, ogwe aka ụlọ, ogwe aka ụlọ ọrụ latex, ogwe aka latex gloves, wdg.
Ogologo: 23cm, 30cm (9 sentimita asatọ, 12 sentimita asatọ); ọkpụrụkpụ 0.08mm-0.09mm;
Agba: agba aja aja / odo odo;
Main Efrata: eke latex;
Mbukota: 50pcs / akpa ma ọ bụ 100pcs / akpa (agụụ nkwakọ);
Nkọwapụta: XS, S, M, L, XL; a na-ejikarị ya na ngwá electronic, nri, ọgwụ, optoelectronics na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ya.
Njirimara nke latex gloves
Ubọchi Latex kwesịrị ekwesị maka ahụike, nrụpụta ụgbọala, imepụta batrị; Plọ ọrụ FRP, nzukọ ụgbọ elu; ụlọ ọrụ aerospace; nhicha na nhicha gburugburu ebe obibi. Mkpịsị aka Latex nwere nguzogide abrasion, mgbapu mgbapu; iguzogide acids na alkalis, griiz, mmanụ na ihe mgbaze dị iche iche, wdg; ha nwere otutu njigide nke kemịkal na nguzogide mmanụ dị mma. Mkpịsị aka Latex na-egosipụta ụdị mkpịsị aka mkpịsị aka pụrụ iche, nke na-eme ka njigide ahụ dị ukwuu ma na-egbochi nkwụsịtụ; ihe eji emepụta ihe na-enweghị akara nkwụ, ọbụnadị na-abanye na gluu ma bulie nchebe; ụdị aka a na-ahụkarị, ịcha owu, na-eme ka nkasi obi dịkwuo mma.
Mkpịsị aka Latex mepụtara site na akara mmepụta latex glove kwesịrị iji latex eke dị ka ihe akụrụngwa maka nhazi. Emechara gloves mepụtara nwere ike iji mee ihe n'ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọgwụ, mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ulo oru Latex bu ihe nchebe di nkpa n’ime ndu ndi mmadu. Uwe Latex na-eji latex eke na ihe ndị ọzọ dị mma. Mgbe a pụrụ iche n'elu ọgwụgwọ, ha na-agbanwe, ezigbo onye na mfe eyi. 100% eke latex gloves nwere oke mgbanwe dị oke elu, yabụ ha ga-enwe ahụ iru ala mgbe ị na-eyi, ma n'otu oge ahụ nwee ike dị elu. Ọnụ ọgụgụ pinhole dị ala, n'ihi ya, ọ nwere njirimara nchedo mmechi magburu onwe ya. Maka ụlọ ọrụ, mmepụta ihe ubi, ọgwụgwọ ma ọ bụ ndụ kwa ụbọchị, ọ nwere ọtụtụ ngwa. Mkpịsị aka Latex gụnyere gloss latex gloss, concave ụkpụrụ latex gloves, transperent latex gloves, nkeewa akara latex gloves na ntụ ntụ-enweghị latex gloves.
Nke gara aga: Ofu Asọmpi Price Pvc Safety uwe Equipment - Food ọkwa ịkwanyere uwe mmepụta akara - Chuangmei
Osote: Nitrile glove production line
Medical Disposable uwe igwe
Medical Disposable uwe Ime Machine
Medical Disposable Latex uwe igwe
Medical Disposable Latex uwe ime igwe